Daandiin Xayyaara Itoophiyaa Boeing 787- 8 biliyoonaa $1.3 bituuf Boeing woliin mallatteesse - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Diinagdee Daandiin Xayyaara Itoophiyaa Boeing 787- 8 biliyoonaa $1.3 bituuf Boeing woliin mallatteesse
Daandiin Xayyaara Itoophiyaa Boeing 787- 8 biliyoonaa $1.3 bituuf Boeing woliin mallatteesse
Dhaabbanni Boieng kan ifa taasise Daandiin Xayyaara Itoophiyaa xayyara 6 gosa Boeing 787-8 (Dreamline) jedhamu bituuf woliigaltee irra gayuu isaati. Gatiin xayyaara Dreamliner 6 dimshaashumatti biliyoona $1.3.
Daandiin xayyaara Itoophiyaa xayyaarota kanniin kan bituuf dandeettii imaltoota deeddeebisuu olkaasuufi tajaajila kennu saffisiisuuf ta’uu ibsa. Bittaan xayyaarota kanaa qaama ‘vision 2015’ Daandiin Xayyaara Itoophiyaa baafatee socho’aa jiru ta’uu isaa dubbate ob. Tawoldee Gabramadhiin, mataan hoji raawwachiisaa Daandii Xayyaarichaa.
Bifuma wolfakkaatuun Daandiin Xayyaara Itoophiyaa bittaa motora xayyaaraatiif dhaabbata Rolls-Royce wojjiin woliigaltee miliyoonaa $500 taasiseera.
Daandiin Xayyaara Itoophiyaa Boeing Dream liner (787) jalqabaa dhaabbata Boeing irraa bara 2012 kan bitee harkatti galfate. Ammatti Boeing Dreamliner 13tu daandii Xayaarichaatiif tajaajila laataa jiru.Daandiin Xayyaara Itoophiyaa yeroo kanatti xayyaarota 74 tajaajila irra jiran qaba. Ammoo, xayyaarota 45 bituuf ajaja laatee eeggataa kan jiru ta’uunis beekameera.
Xayyaarri Boeing 787-8 (Dreamliner ) jedhamu %20 gaaza qusata. Yeroo kanatti guutuu addunyaa irraa maamiltoonni 58 xayyaara Boeing 787-8 ykn Dreamliner 1,071 bituuf ajaja dhaabbata Boeing itti laatanii eeggachutti jiru.
xayyaara boeing 787-8
Previous articleGuyyaa faayda-qabeessa qabaachuuf ganama qabxiilee 7n kanniin irratti hojjachuu qabdu
Next articleIMF- Ethiopia needs more private sector investment to sustain growth